Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Adam Lallana Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Handsome nke kacha mara aha na aha njirimara; "Mr Ezi Anya.". Anyị Adam Lallana Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Adam Lallana's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Adam Lallana Storymụaka Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Adam Adam Lallana na 10th ụbọchị May na obodo St Albans, Hertfordshire, United Kingdom.
Ọ zụlitere mbido na St Albans mana ọ kwagara n'ógbè Iford nke Bournemouth mgbe ọ dị afọ ise. Ọ gara ụlọ akwụkwọ Corpus Christi na St Peter's Catholic Comprehensive School soro.
Dika nwatakiri, Lallana kwadoro Everton, dika nna ya. Ọ bụ onye sitere na Spanish site na nna nna ya.
Lallana bụ onye otu n'ime ụlọ ọrụ mara mma nke Bournemouth, bụ ebe onye ọkachamara na-ahụ maka ọrụ sitere na Southampton hụrụ ya. Ọ sonyeere ụlọ akwụkwọ mmuta nke Premier League dị ka 12 afọ na Septemba 2000.
Lallana malitere ịrụ ọrụ ntorobịa ya Bournemouth tupu ịgafe Southampton na 2000, bụ ebe ọ malitere na ụlọ akwụkwọ ha ma ghọọ ọkachamara na 2006. N'ikpeazụ, aha ya bụ Southampton. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Emly? Nwunye Adam Lallana:
Nesschọ mma nke anụ ahụ dị n'anya onye na-ahụ ya. Nke a bụ ikpe maka Adam na Emly bụ ndị mara mma. Mma mara mma nke Emly mere Adam jiri hụ ya n'anya.
Omume ịhụnanya ha batara na ndụ mgbe ha abụọ nọ na Bournemouth. Di na nwunye ahụ ha na ha dinara kemgbe afọ asaa, ma lụọ na 14 June 2014, nke dabara na England na-emepe egwuregwu World Cup na Italytali.
Ha ka na-aga n'ihu na wed na Poole Register Office dị na Dorset. Ha abụọ, Arthur Michael, mụrụ na 26 September 2012 na Albie George mụrụ na 3 June 2015.
Adam Lallana Ezinụlọ:
Adam Lallana si n'ezinụlọ ndị bara ọgaranya tupu akwụ ụgwọ football. Nna ya David gbara ọsọ n'ụlọ nlekọta, ya mere Lallana ji oge nwata ya biri n'etiti ndị agadi, ndị mmadụ na-enweghị ike iche echiche nke ọma, mgbagwoju anya yana ịnwụ. laa azụ n'oge a, Adam Lallana ji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na ya.
More banyere Nna Adam Lallana: Nna Adam Lallana, David Lallana nke di n'okpuru bu Freemason.
Otu Freemasonry bụ otu n'ime ụwa ochie na nke na-abụghị nke okpukperechi, nke na-abụghị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke nwanne na nke ọrụ ebere. Mgbọrọgwụ ya dabeere na ọdịnala na ememe nke ndị ochie na-ewu ụlọ bụ ndị wuru katidral na nnukwu ụlọ UK. A na-eme emume ụfọdụ taa.
N'oge na-adịbeghị anya, freemason ogologo oge David Lallana ghọrọ onye isi ntọala nke Masonic Lodge nke ụkwụ Britain kachasị ọhụrụ. Ọ kwere nkwa iji bọọlụ bọọlụ dị na Southampton, Hants, nyere ndị egwuregwu egwuregwu aka.
N'okpuru ebe a ka David Lallana na-eme ememe ahụ na ndị enyi ya.
Ọ bụ ebe obibi nke ọkachamara nke anọ na-achịkwa n'ógbè ahụ n'ime afọ anọ gara aga, mgbe ịmalitere ụlọ ezumike nká, ebe obibi rugby na motorsports na-abanye.
Banyere ịnye nwa ya nwoke ihe nketa ya, David Lallana kwuru ozugbo…"Adam maara banyere Freemasonry dị ka m," kwuru na David dị mpako, bụ onye mụtara mmetụta Freemasonry na pitch.
N'ikpeazụ, David Lallana gosipụtara eziokwu Freemason nke gosipụtara na ndị òtù ya na-achịkwa football na Britain.
N'okwu ya ... “Ndị Freemason kwesịrị ịgbapụta Manchester City, ọ bụ ya mere ha ji eji egwu na-acha anụnụ anụnụ na uwe ọcha na-acha ọcha. N'ikwu nke a, Liverpool FC tọrọ ntọala site na bọọdụ Masons na ebe obibi Anfield ka na-ezukọ. N'ikpeazụ, Sir Alf Ramsey, onye naanị England na-emeri iko ụwa, bụ Mason. ”
Nne: Sharon Lallana na-ese onyinyo nke dị na foto a bụ nne Adam Lallana.
A na-ese ya na nne nke Luke Shaw, Joanne Shaw bụ ezigbo enyi ya. Abụọ ndị dị mpako bụ Sharon Lallana na Joanne Shaw, ụmụ Adam na Luke ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-enwe obi ụtọ maka ịbụ nne ha mgbe ha na-enwe obi ụtọ maka ịma ọkwa England.
SISTER: N'okpuru bụ Natalie Lallana, nanị nwanne na nwanne nke Adam Lallana. Natalie bụ onye ndụmọdụ na onye njikwa Adam.
Adam Lallana Ndụ nke Onwe:
Adam Lallana nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike nke Adam Lallana: Na ederede nke onwe gị, Adam Lallana nwere ike ịdabere na ya, nwee ndidi, na-eme ihe, nke a raara onwe ya nye, nke nwere ike ịkwado ya na mmekọrịta ya.
Adịghị Ike Adam Lallana: Mgbe ụfọdụ, Adam nwere ike ịbụ onye isi ike, nke nwere ikike, nke na-adịghị mma.
Ihe Adam Lallana nwere mmasị: Ọ hụrụ ugbo, nri, egwu, ịhụnanya, uwe dị elu ma na-arụ ọrụ aka ya.
Ihe Adam Lallana achọghị: Adam na-enwe mmasị na mberede mgbanwe ya na-atụ anya, nsogbu site esemokwu na nchebe nke ụdị ọ bụla.
Na nchịkọta, Adam dị irè ma nwee ezigbo ntọala. Ọ hụrụ ka ịhụnanya na ịma mma gbara ya gburugburu dịka nwunye ya Emily Jubb nyere ya. Dị ka onye nwere mmetụta uche na nke nwere ọgụgụ isi, Adam na-ele aka ma na-anụ ụtọ ihe kachasị mkpa nke uche niile.
Adam Lallana akụkọ nke na - ezigbo enyi:
Tya ima n'etiti uzo (Adam Lallana na Jordan Henderson) bụ ezigbo.
Ha na-emegide ibe ha na Formby, Merseyside na Nathaniel Clyne gburugburu akụkụ na Emre nwere ike nso.
Na 2014, Lallana abanyela ozugbo dị ka ihe njikọ French, iji kwalite nchịkọta Mgbụsị akwụkwọ / Oge oyi. O kpughere foto ejiji ya na nyochaa Magazin Esquire. N'okpuru ebe a bụ nchịkọta ya nke mere n'ezie ka ọ bụrụ onye na-eto eto kasị nwee mmekọahụ.
Adam Lallana Biography Eziokwu - Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ:
Lallana na-ekerịta ọnya afọ na-aga na peeji nke Instagram - nke na-etu ọnụ ụmụazụ 1.3million.
O kwuru ihe osise ahụ: “Aro ọ bụla maka ịgbanye ụkwụ. #nofilter. ” Mkpịsị ụkwụ nwoke England ahụ merụrụ ma gbanwee agba ọcha na-acha ọcha mgbe nsogbu Premier League gasịrị. Ihe oyiyi ya zutere site na nyocha dị iche iche site na mgbasa ozi mgbasa ozi ya.
Adam Lallana igbu:
Kpakpando ahụ mara mma nwere nkọwa ụfọdụ dị iche iche site na mkpịsị aka ya, na-egbuke egbuke n'akụkụ ogologo ya.
Lallahụnanya Adam Lallana Fan:
N'otu oge, egbugbu na-ese foto n'okpuru ebe a na-efe efe na usoro mgbasa ozi. Otu onye Liverpool na-amaghị ama mere 'Adam Lallana face' nke mere ya n'apata ụkwụ, nke ukwuu bụ ihe ọchị nke ndị egwuregwu ebe niile.
Ma ọ na-atụgharị na ibe ahụ bụ n'ezie ụtụ maka enyi ya nwụrụ anwụ wee bịa na akụkọ ọma dị mma-akụkọ anyị na-ewetara gị n'okpuru.
N'okwu yaEnwetara m egbu egbu ebe a na Nashville, United States ebe m bi. Enwetara m ya na Mọnde, (Feb 6, 2017), mana anọ m na ndị na-echere oge ka ọ rụọ ọrụ. "Gịnị kpatara Adam Lallana?" na “gịnị kpatara m ji egbu egbugbu?” ofdị na-aga aka-na-aka.
M bi na Kentucky afọ ole na ole gara aga, m wee nwee enyi na kọleji aha ya bụ Paige. M webatara ya Liverpool ma ọ ghọrọ onye ofufe. Mgbe anyị bịanyere aka na Adam Lallana, Paige nwere mmasị na ya wee bụrụ ọkacha mmasị ya n'ihi na ọ mara mma.
Iji ụdị ahụhụ ya ntakịrị, m na-akpọ ya "Adam Lallana" - ọ ga-ewe iwe, mana na njedebe, ọ na-eme ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe niile. Na 2014, enyi m Paige nwụrụ n'ihi ọrịa. Ka afọ ole na ole gachara, echere m, "A ga m egbu egbugbu dịka ụtụ nye Paige", mana enweghị m ike ikpebi ihe m ga-enweta.
M kwagara Nashville na 2015, ma sonyere ndị na-akwado mpaghara ebe a maka Liverpool (The Nashville Kop). Mgbe m nọ na ụlọ mmanya otu ụbọchị na-ele egwuregwu, Adam mere ihe "Player nke Year" -ish na m chere na nke "Paige". O mere ka m mụmụọ ọnụ ọchị na-echeta. O wutere m na Paige apụla, mana enwere m obi ụtọ na m nwere ebe nchekwa ahụ. Ọ bụ ya mere m ji kpebie igbu egbugbu ahụ.
Ndị m maara n'onwe ha niile hụrụ ya n'anya wee chee na ọ dị mma. Isntanetị bụ akụkọ dị iche kpamkpam. O yiri ka 50/50 kewara n'etiti okwu ọma na nke na-adịghị mma. Anọ m na-agbalị izere ịgụ banyere ya nke ukwuu.
E nwere ndị na-emebu pụtara kwuru – aru shaming, ndị mmadụ na-adịghị mma – ma mgbe ahụ nwekwara ndị ahụ kwuru na m mere ụbọchị ha ma ọ bụ mee ka ha chịa ọchị, ma ọ bụ na ugbu a chọrọ llama tattoos, haha.
N'ikwu eziokwu, mgbe m lere ya anya, ọ na-eme m ọnụ ọchị. Echere m banyere enyi m Paige na echere m na ọ ga-enweta ya. Onye chọrọ ịlụ m ga-achị ọchị mgbe ọ bụla ọ hụrụ ya, ya mere ọ na-eme ya obi ụtọ.
Ndị enyi m niile hụrụ ya n'anya, Adam Lallana n'onwe ya chịrị ọchị ma kwado ya, ya mere enwere m obi ụtọ zuru oke na ya. Dika ihe ojoo, obu udi nkpuru. Enwetara m egbu egbu ma dinara ala na-echeghị banyere ya. Nwa nwoke, m hiere ụzọ? ”
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Adam Lallana Childhoodmụaka Akụkọ ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.